Akụkọ - Nri IQF nwere ike ịbụ ihe ga - eme eme maka ọdịnihu na-adigide?
Nri IQF nwere ike ibu ihe ngosiputa diri nma maka odi niru?
Abụọ 22, 2021 | Akụkọ
Site n'oké osimiri ndị na-emerụ emerụ, mmiri dị ala n'okpuru ala, na-abawanye ọkwa CO2 na mbara igwe na ọnọdụ mberede ihu igwe na mkpịsị aka anyị, ọ bụghị ihe ijuanya na otu n'ime usoro nri atọ kacha elu maka 2021 na-ebelata mkpofu nri. Nke a bụ ihe dị oke mkpa nke kwesiri ka ewere ya ma ọ bụrụ na anyị bu n'obi idozi enweghị nchekwa nri ma belata mgbanwe ihu igwe.
Dika UN Environment Programme si kwuo, ihe dika uzo ato n'ime ihe oriri eweputara n'uwa niile ka mmadu rie kwa afo - ihe dika otu nari na ato ijeri abuo - furu efu ma obu tufuo. ”
Eziokwu na-agbagwoju anya na-eburu n'uche ihe dị ka nde mmadụ 800 na-enweghị nri n'ụwa ugbu a yana nsonaazụ na-agbawa obi nke ihe mberede mberede ihu igwe na-enweghị ike igbochi.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya na mkpofu nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ọnọdụ ahụ dị njọ karị. Na mba ndị na-emepe emepe, 40% nri mkpofu na-eme n'oge owuwe ihe ubi na nhazi oge na mba ndị mepere emepe - ihe karịrị 40% nke ihe mkpofu nri na-eme na ụlọ ahịa na ndị ahịa. N'ihe banyere mbupụ site na mmepe gaa na akụnụba mepere emepe - mgbakọ na mwepụ na-atụ ụjọ.  Ihe mkpofu sitere na nkpuru ohuru nwere ike iru 70-80% di oke ma oburu na anyi guru site na ubi rue mgbe ndi na - eri nri. Ọzọkwa, dị ka ọmụmụ mba mba Europe si dị, “mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ na-enye aka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ihe mkpofu nri ndị ezinụlọ EU na-ewepụta”.
Cannye nwere ike ime gịnị?
Yabụ kedu ka anyị ga-esi merie ọdachi nri a? Otu ụzọ ndị na-ahụ maka nri ndị ọhụụ na-anwa ime akụkụ ha bụ omume nke ịkọghachi nri site na ịtinye uru na ngwaahịa na ngwaahịa ndị ọzọ, ebe onye ọzọ nwere obi ike ma na-aga nke ọma bụ ịzụ ahịa na ire nke akpọrọ "nri jọrọ njọ" ma ọ bụ ngwaahịa na-ezughị oke. nke nwere ike gosiputa, nke agba na-ezighi ezi, ma ọ bụ mmerụ n'ụzọ ụfọdụ. Enwekwara ndị otu na-anwa ime mkpọtụ akara ụbọchị, ọkachasị na ụlọ ọrụ mmiri ara ehi, wee nyere aka wepu nri nri.
Otú ọ dị, ndị na-emepụta akụrụngwa nwere ike iweta òkè ha na tebụl. Onye ndu ama ama na injinia na n'ichepụta teknụzụ nke Individual Quick Freezing (IQF) - ụlọ ọrụ OctoFrost - kwenyere na enwere ike iji teknụzụ IQF mepụtara iji dozie okwu mkpofu nri n'ọtụtụ ọkwa dị iche iche.
Ihe mbu bu ihe mbu, gini bu IQF?
IQF na-anọchite Onwe Onye n'otu n'otu ọ na - enweta ya site n'iji mmiri ikuku dị jụụ ma sie ike iji kewaa ngwaahịa ọ bụla (ma ọ bụghị ụlọ akwụkwọ ochie na - agba oyi) na ọwara mmiri na - wee kewapụ ngwaahịa ngwaahịa oyi kpọnwụrụ akpọnwụ. nri siri ike dị ka mkpụrụ osisi diced, mkpụrụ osisi ma ọ bụ ọbụna shred, cheese ma ọ bụ sie anụ. Ohere di buru ibu na ahia nke ichoro IQF na otutu nkpuru na akwukwo nri nke ichotara na uzo ahia gi, IQF juru oyi.
N'ihe banyere uru nke ngwaahịa IQF, ọ ga-abụrịrị na ịdịmma dị n'elu maka ndị na-azụ ahịa nwere ike iwepụ ego ole achọrọ ma chekwaa ndị ọzọ na friza ha (na-enweghị mkpa ịmịchaa ngwugwu ahụ).
Mana odi mma ka odi taa? Expertsfọdụ ndị ọkachamara n’ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri ga-arụ ụka na. Ọ dịka ndị na - azụ ahịa enwetabeghị ihe ọ aboutụ aboutụ banyere ịdị mma, ọdịdị na uru nri ha bara. Nke a bụ ebe ọhụụ teknụzụ na-abịa napụta. Kpọmkwem, atụmatụ teknụzụ nke nwere ike ime ka ngwaahịa ndị ahụ kpụkọrọ akpụkọ dị ka agụụ dị ka ndị ibe ha ọhụụ ma mechie nri ha - bụ ndị na-agbanwe egwuregwu na agwa ndị ahịa.
Ọhụrụ karịa nke ọhụrụ
Nnyocha na-egosi na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri oyi kpọnwụrụ dị ọhụrụ karịa ngwaahịa ọhụrụ ma nwee ọbụna ọtụtụ nri na-edozi ahụ . Ihe kpatara nke a bụ na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri friji na-egbukarị n'oge kachasị elu nke ntozu nwere ọtụtụ nri na uto, yana usoro nju oyi na-ekpochi naanị na ịdị mma niile nke ngwaahịa chara acha.
N'ihe banyere mkpụrụ osisi ọhụrụ, ọ na-ewe ihe karịrị izu abụọ site na ụbọchị a na-atụtụ akwụkwọ nri ruo ụbọchị a na-eri ha, oge ejiri oge nchekwa, njem na n'elu shelf nke nnukwu ụlọ ahịa. N'oge a niile, akwụkwọ nri ọhụrụ nwere ike ida pasent 45 nke ihe dị mkpa na-edozi ahụ. 
IQF nri ọ ga-azọpụta ụbọchị?
Ọ ga-ewe ihe karịrị nke ahụ iji dozie nsogbu mkpofu nri, mana ọ nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa na usoro dị mgbagwoju anya maka nsogbu siri ike.
Site na mbenata ihe mkpofu ụlọ n'ihi ịdị mma nke iji ego achọrọ dị mkpa ma na-echekwa ndị ọzọ na friza, teknụzụ IQF nwere ike inyere aka na-apụta ihe oriri na-emegharị emegharị - site na ịpị na IQF na-atụgharị ma ọ bụ ihe ndị na-adịghị mma.
Na mgbakwunye, ọ na-edozi esemokwu nke nkesa nri na mpaghara yana ọtụtụ mkpụrụ ọhụụ ebe a na-eri oke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na ubi n'ihi enweghị ike ịzụ ahịa.
Nke ikpe azu, ma obughi opekata mpe, IQF teknụzụ nwere ike ịnọ n’obi ịtọlite ​​ụdị azụmaahịa na-adigide na obodo akale ebe akụ ma ọ bụ nwere ike ịghọrọ mkpụrụ ọhụrụ.
Na mkpokọta, ngwaahịa ndị na-eme ka oyi jụọ oyi na-adị ọhụrụ, ahụike, adaba, ma na-adigide maka ọdịnihu nke ụwa anyị. Ndị ahịa na azụmaahịa ga-enwerịrị ga-agbanwe usoro a gbasara etu esi esi mepụta ma rie nri n'ihi na ọ nweghị otu ụzọ maka nsogbu mkpofu nri zuru ụwa ọnụ, mana anyị kwesịrị itinye ọtụtụ echiche dị iche iche, nke ọhụụ na nke obi ike iji nwee opekata mpe ohere iji merie.